” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ - Barnyar Barnyar
March 5, 2022 KNOWLEDGE 0
ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။
သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။
“ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” ဟုတ်ကဲ့ လူတော်တော်များများကတော့ ငွေရှိရင် ပိုခင်ကြပါတယ်။ “ရိုးသားမှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” ဟုတ်ကဲ့ လူအများစုကတော့ မရိုးသားရင်တောင် ငွေရှိတဲ့လူဆို သိပ်မပြောရဲကြပါဘူး။
“ပညာက ပိုအရေးကြီးတယ်” ဟုတ်ကဲ့ ငွေရှိမှ ပညာသင်လို့ရတဲ့ ခေတ်မှာ ပညာရွှေအိုးက ငွေရှိမှ ဝယ်လို့ရတာပါ။ “ကိုယ်ကျင့်တရားက အရေးအကြီးဆုံး” ဟုတ်ကဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းတဲ့သူတွေ ငွေရှိလာရင် အမှန်တရားက ရောက်လာဖို့ ခြေလှမ်း သိပ်နှေးလွန်းပါတယ်။ “အချစ်က အရေးကြီးတယ်” ဟုတ်ကဲ့ ရယ်စရာအကောင်းဆုံး ပြက်လုံးပါ။
လူအားလုံးလိုလိုကတော့ ငွေမရှိရင် ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ မြင်တယ် ငွေမရှိရင် နံတယ်လို့ ထင်တယ် ငွေမရှိရင် ပိုင်းလုံးလို့ မြင်တယ် ငွေမရှိရင် ရင်မခုန်ကြတော့ပါဘူး။ ဒါပါဘဲ…. ဘယ်နည်းနဲ့တွေးတွေး ဘယ်ဖက်ကတွေးတွေး ငွေရှိမှ အရာအားလုံးလိုလို အဆင်ပြေနိုင်ပါမယ်။ တသောင်း ဆယ်ခါဖြုန်းရင် တသိန်းပါ။ တသိန်း ဆယ်ခါဆို ၁၀သိန်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ အများကြီး ဖြုန်းခဲ့ပြီးပါပြီ။
မလိုတာတွေ ဝယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မတန်တာတွေ စားခဲ့ဖူးတယ်။ မတန်တာတွေ ဝယ်ဝတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မရှိရင်လည်း ချေးငှားပြီးပျော်ခဲ့ဖူးတယ်။ သဒ္ဓါမပါဘဲ ကြွားဝါပြီး လှူခဲ့ကြဖူးတယ်။ အားနာပြီး ကုန်ခဲ့ကြဖူးတယ်။
အချိန်တန်တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘာမှ အဖက်တင်မကျန်ခဲ့ဘူး။ အသုံးနိုင်ဆုံး ဆုလည်းမရခဲ့ဘူး။ အစားနိုင်ဆုံး ဆုလည်းမရခဲ့ပါဘူး။ အဝတ်နိုင်ဆုံးဆိုပြီးလည်းကမ္ဘာမကျော် နိုင်ငံမကျော်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးသင့်တဲ့နေရာသုံး မဖြုန်းသင့်တဲ့နေရာ မဖြုန်းဘဲ စနစ်တကျ စုဆောင်းသွားတဲ့သူတွေ အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ သူတွေကသာ သူဌေးဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်သွားတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဖြုန်းခဲ့တဲ့အတွက် ဘာရလိုက်သလဲ…? ဒါ့ကြောင့်… ကျွန်တော်တို့ သိပ်နောက်မကျခင် ငွေစစုကြရအောင်လား။ ကဲ…. မိတ်ဆွေ သင် ဖြုန်းမယ်ပြင်ထားတဲ့ ငွေစက္ကူတွေကို အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်ထားလိုက်ပါ။
” ပိုကျဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖွုနျးပါနှငျ့ “
ပိုကျဆံရှိမှ ဖွဈတော့မယျလို့ တှေးမိတဲ့အခြိနျဟာ ခရီးတဈခုကို စတငျဖို့ လကျမှတျစဝယျတာနဲ့ တူပါတယျ။ လောကမှာ ပိုကျဆံရှိမှ ပိုအဆငျပွနေိုငျပါတယျ။ မိသားစုထဲမှာ ကွညျ့ပါ။ ပိုကျဆံရှာနိုငျတဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောကျပါတယျ။ အပေါငျးအသငျးတှေ ကွားထဲ ကွညျ့ပါ။ ပိုကျဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝငျပါတယျ။
လူမှုအဖှဲ့အစညျး တဈခုခုကို ကွညျ့ပါ။ ပိုကျဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောကျပါတယျ။ ဒါဟာ လောကကွီးထဲမှာ ရာခိုငျနှုနျး တျောတျောမြားမြား ဖွဈနတောပါ။ ဘယျနညျးနဲ့ကွညျ့ကွညျ့ သငျ ပိုကျဆံရှာရပါမယျ။ ငှစေုရပါမယျ။
သငျပိုကျဆံရှိမှ သငျခဈြတဲ့သူတှအေတှကျ သငျလုပျခငျြတဲ့အရာတှအေတှကျ သငျပွောခငျြတဲ့စကားတှအေတှကျ သငျလိုခငျြတဲ့အရာတှအေတှကျ အားလုံးမဟုတျရငျတောငျ တျောတျောမြားမြားလုပျလို့ရမှာပါ။
“ခငျမငျမှုက ပိုအရေးကွီးတယျ” ဟုတျကဲ့ လူတျောတျောမြားမြားကတော့ ငှရှေိရငျ ပိုခငျကွပါတယျ။ “ရိုးသားမှုက ပိုအရေးကွီးတယျ” ဟုတျကဲ့ လူအမြားစုကတော့ မရိုးသားရငျတောငျ ငှရှေိတဲ့လူဆို သိပျမပွောရဲကွပါဘူး။
“ပညာက ပိုအရေးကွီးတယျ” ဟုတျကဲ့ ငှရှေိမှ ပညာသငျလို့ရတဲ့ ခတျေမှာ ပညာရှအေိုးက ငှရှေိမှ ဝယျလို့ရတာပါ။ “ကိုယျကငျြ့တရားက အရေးအကွီးဆုံး” ဟုတျကဲ့ ကိုယျကငျြ့တရား မကောငျးတဲ့သူတှေ ငှရှေိလာရငျ အမှနျတရားက ရောကျလာဖို့ ခွလှေမျး သိပျနှေးလှနျးပါတယျ။ “အခဈြက အရေးကွီးတယျ” ဟုတျကဲ့ ရယျစရာအကောငျးဆုံး ပွကျလုံးပါ။
လူအားလုံးလိုလိုကတော့ ငှမေရှိရငျ ရုပျဆိုးတယျလို့ မွငျတယျ ငှမေရှိရငျ နံတယျလို့ ထငျတယျ ငှမေရှိရငျ ပိုငျးလုံးလို့ မွငျတယျ ငှမေရှိရငျ ရငျမခုနျကွတော့ပါဘူး။ ဒါပါဘဲ…. ဘယျနညျးနဲ့တှေးတှေး ဘယျဖကျကတှေးတှေး ငှရှေိမှ အရာအားလုံးလိုလို အဆငျပွနေိုငျပါမယျ။ တသောငျး ဆယျခါဖွုနျးရငျ တသိနျးပါ။ တသိနျး ဆယျခါဆို ၁၀သိနျးပါ။ ကြှနျတျောတို့ အမြားကွီး ဖွုနျးခဲ့ပွီးပါပွီ။
မလိုတာတှေ ဝယျခဲ့ဖူးတယျ။ မတနျတာတှေ စားခဲ့ဖူးတယျ။ မတနျတာတှေ ဝယျဝတျခဲ့ဖူးတယျ။ မရှိရငျလညျး ခြေးငှားပွီးပြျောခဲ့ဖူးတယျ။ သဒ်ဓါမပါဘဲ ကွှားဝါပွီး လှူခဲ့ကွဖူးတယျ။ အားနာပွီး ကုနျခဲ့ကွဖူးတယျ။
အခြိနျတနျတော့ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ ဘာမှ အဖကျတငျမကနျြခဲ့ဘူး။ အသုံးနိုငျဆုံး ဆုလညျးမရခဲ့ဘူး။ အစားနိုငျဆုံး ဆုလညျးမရခဲ့ပါဘူး။ အဝတျနိုငျဆုံးဆိုပွီးလညျးကမ်ဘာမကြျော နိုငျငံမကြျောခဲ့ပါဘူး။ သူ့နရောနဲ့သူ သုံးသငျ့တဲ့နရောသုံး မဖွုနျးသငျ့တဲ့နရော မဖွုနျးဘဲ စနဈတကြ စုဆောငျးသှားတဲ့သူတှေ အလုပျလုပျသှားတဲ့ သူတှကေသာ သူဌေးဖွဈပွီး နာမညျကြျောသှားတာပါ။
ကြှနျတျောတို့ ဖွုနျးခဲ့တဲ့အတှကျ ဘာရလိုကျသလဲ…? ဒါ့ကွောငျ့… ကြှနျတျောတို့ သိပျနောကျမကခြငျ ငှစေစုကွရအောငျလား။ ကဲ…. မိတျဆှေ သငျ ဖွုနျးမယျပွငျထားတဲ့ ငှစေက်ကူတှကေို အိတျထဲ ပွနျထညျ့ထားလိုကျပါ။
ဆေးဖက်ဝင် မုန်ညင်းဆီအစွမ်း အံ့မခမ်း